Yusuf Garaad: Farriimo Mahadcelin ah
2015 waxaan bloggeyga ku qoray 100 maqaal oo xambaarsan macluumaad kala duwan oo aan ugu talo galay soo ifbixin waxyaabo dahsoonaa ama sida loo arkayay dhinac aan ahayn aan ka eegay, dhiirri gelin in uu akhristuhu su’aalo is weydiiyo oo si keli keli ah iyo si wadar ah labadaba loo fekero, wacyi gelin, dood iyo ra’yi wadaag.
Facebook iyo Twitter iyaga waxaan ku qaray intaa in ka badan oo gaa-gaaban oo qaar badan oo ka mid ahi ay yihiin isla noocaas. Baraha internetka, wargeysyada iyo idaacadaha oo aan u fasaxay in ay qaadan karaan ayaa aad u sii faafiyay qaar badan oo qoraalladeyda ka mid ah.
2015 dhammaadkeedii iyo sannadkan cusub waxaan akhristayaasheyda qaarkood ka helay farriimo ay ii soo direen oo isugu jira mahadcelin, bogaadin iyo dhiirri gelin. Waxaa si gooniya ii taabatay farriin qoraal ah oo ay ii soo dirtay Canab oo aynaan si toos ah isu aqoon:
“Haddii sanadka 2015 Award (Jaa’izad) la bixin lahaa Qoraallada kuwa ugu fiican oo lagu bixin lahaa Billad dahab ah, adiga ayaan ku siin lahaa. Aniga oo og fikraddaan in ay dad badani ila qabaan, haddana miskiin aan ahay oo aan waxba bixin karin. Laakiin xaggayga waxaan jeclaystay in aan ku dhaho Mahadsanid Yusuf Garaad halkaas nooga sii wad Insha Allaah. Waan hubaa Taariikhda ayaa ku xusi doonta”.
Posted by Yusuf Garaad at 07:45:00